Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Taiwan: Ibi na ndò nke Nnukwu Nwanna
Na-agbasa News Travel • News • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nnukwu n'ọnụ ụlọ nkwari akụ ahụ, Taipei - Foto © Rita Payne
Ogologo oge ajuju banyere ikike Taiwan dịrị ndụ dị ka steeti agwaetiti kwụụrụ onwe ya. Ọ nọ n'ọnọdụ dị njọ n'oké osimiri dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ala ndị China, ndị agbata obi ya dị ike na-ahụta dị ka ndị nnupụisi.
Mba Taiwan guzobere n'ụdị ya ugbu a na 1949 site na ndị hụrụ mba n'anya gbagara n'àgwàetiti ahụ mgbe ọchịchị Kọmunist na-achịkwa China. Commtù Kọmunist nke China ekwuputala ugboro ugboro na ọ chọrọ Taiwan ka ọ lọghachi na China ndị ọzọ ma na-eyi egwu agwaetiti ahụ site na ngosipụta nke ike, gụnyere mmemme ọkụ ọkụ na "omume ọsọ" nke mbuso agha. Na nloghachi, Taiwan bụ otu n'ime ógbè kachasị agbachitere na Asia.
N'agbanyeghị nsogbu ndị a, ọ bụghị nanị na Taiwan anwụbeghị ma nwee ọganihu. Ọ na - eduga ụwa na mmepụta nke semiconductors, nke a enyekwara ya aka ịba ụba na akụ na ụba nke iri abụọ na atọ n'ụwa. Citizensmụ amaala ya nwere nnukwu nnwere onwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọkwa ịda ogbenye, enweghị ọrụ, na mpụ dị ala.
Ihe mgbochi diplọma
Ọnọdụ akụ na ụba nke ala China abawanyela ikike ọhaneze ya na mba ụwa. O jiri ikike a gbochie Taiwan ịbanye na mba ụwa. Agọnahụ Taiwan ọbụlagodi ọnọdụ onye nlere anya na United Nations, na anaghị anabata ndị nwere paspọtụ Taiwan ịga ogige UN. Otu mgbochi a metụtara World Health Organisation na ụwa ndị ọzọ.
Ihe osise ọ bụla na-egosi Taiwan dị iche na China na-adọta iwe Beijing. Ọtụtụ oge, ndị isi Taiwan na-anwa izere ịma aka ma ọ bụ ịkpasu iwe na China na ebumnuche ịkwalite ọdịmma nke ha site na njikọta na mba ndị enyi.
Nzaghachi a na China si yiri ekworo nke onye bụbu onye ọlụlụ nke na-ama ndị na-achọ ịlụ ya ọgụ. Beijing na-eyi egwu ịkwụsị njikọ na mba ọ bụla nke na-amata Taiwan. Maka ọtụtụ obere akụnụba, iwe China bụ atụmanya na-atụ ụjọ. Ọbụna obere mba ndị dị na Pacific, Kiribati na Solomon Islands, bụ ndị e nwetaworo mmesapụ aka nke Taiwanese, kewapụrụ njikọ na Taipei n'oge na-adịbeghị anya n'ihi nrụgide Beijing. E nwere naanị mba iri na ise nwere ndị nnọchi anya mba ọzọ na Taiwan. Na nkwụghachi nke iguzosi ike n'ihe, Taiwan na-agbapụta kapeeti uhie maka ndị isi nke mba ole na ole nke ka na-akwado ya.
Taiwan nwekwara ike ịdabere na ndị otu nọ n'ọchịchị na United States, n'agbanyeghị na enweghị ndị nnọchi anya gọọmentị.
Minista na-ahụ maka Ofesi na Taiwan, Joseph Wu, gwara ndị otu nta akụkọ si Europe na nso nso a na obi siri ya ike na ya na Donald Trump na White House, Taipei ga-enwe ike ịdabere na nkwado Washington.
O chetaara ndị ntaakụkọ na mgbanaka mgbanaka nke odeakwụkwọ nke United States, Mike Pompeo, bụ onye kọwara Taiwan dị ka "akụkọ ihe ịga nke ọma onye kwuo uche ya, onye ọlụlụ a pụrụ ịtụkwasị obi, na ike maka ọdịmma n'ụwa." Maazị Wu kwuru, "Dịka m nwere ike ịhụ, mmekọrịta ka dị ọkụ, ana m atụ anya na mmekọrịta ga-aka mma n'ihi na Taiwan nwere otu ụkpụrụ na otu ọdịmma dịka United States."
Maazị Wu rụtụrụ aka na njikọ njikọ siri ike na EU, n'agbanyeghị enweghị ọrụ nke ndị ọchịchị. N'oge a, nanị steeti Europe nke na-amata Taiwan n'ezie bụ Vatican. Ihe kpatara nke a bụ oke iro dị n’etiti ụka na Communist China, nke na-akwado nkwado Chukwu na ekwenyeghị na okpukpe. Agbanyeghị, iwepụ mmekọrịta dị n'etiti Vatican na China yiri ka ọ na-ewere ọnọdụ ka a na-anabatawanye Iso Christianityzọ Kraịst na mba. Maazị Wu kwetara na ọ bụrụ na Vatican ga-achụso mmekọrịta mmekọrịta na Beijing, nke a nwere ike inwe mmetụta na njikọ ya na Taipei.
O kwuru banyere mkpagbu a kpagburu ndị Katọlik na China, sị, “Anyị niile nwere ọrụ ime ihe ga-eme ka ndị Katọlik nọ na China nwee nnwere onwe okpukpe.” O kwukwara na Vatican na Taiwan nwere otu mmasị n'inyere “ndị ọ na-enweghị ka ọ ha ha aka” aka. Taiwan ji teknụzụ ya, ahụike ya, yana agụmakwụkwọ ya enyere mba ndị na-emepe emepe aka na Asia, Africa, na Central America.
Ndị ndu Taiwan na-eme mkpesa na ha na-atụfu ahụike, sayensị, na ihe ndị ọzọ dị mkpa na ozi n'ihi na ewepụrụ ha na nzukọ na nzukọ mba ụwa.
Otu onye isi ọrụ Taiwanese gosipụtara ihe atụ nke ọrịa SARS, nke a kabatabeghị na Taiwan. O kwuru na enweghị ike isonye na WHO pụtara na a na-egbochi Taiwan ịnakọta ozi gbasara etu a ga-esi gboo ọrịa a.
Taiwan na-etinye onwe ya dịka onye ndu ụwa na teknụzụ na sayensị. Ọ nwere ogige ntụrụndụ sayensị atọ na-enye nkwado maka azụmaahịa, sayensị, na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ.
Dị ka akụkụ nke ndị nnọchianya nke ndị nta akụkọ si mba ofesi, m ji ụgbọ oloko na-agba ọsọ gaa Taichung, ebe a kpọgara anyị na njem nlegharị anya na Central Taiwan Science Park. Facilitylọ ọrụ a na-eme nchọpụta ọsụ ụzọ na mmepe nke AI na robot. Speedlọ ọrụ Speedtech Energy bụ ọkachamara na mmepe, ịmepụta, na mbupụ ngwaahịa dabere na ike anyanwụ. Ndị a nwere ike ịdị site na ọkụ n'okporo ámá na usoro mgbapụta mmiri na igwefoto, ọkụ, redio, na ndị na-agbapụ.
E guzobere Chelungpu Fault Preservation Park, nke dị na mpụga Taipei, iji cheta ala ọma jijiji ahụ mebiri emebi na 1999. Ebe etiti a bụ Chelungpu Fault mbụ, nke butere ala ọmajiji ahụ gburu ihe karịrị mmadụ 2,000 ma kpatara mmebi nke ọtụtụ ijeri dollar. Ogige ahụ bụ akụkụ nke National Museum of Science Science. Otu n'ime ọrụ ya bụ ịme nyocha banyere ihe kpatara ala ọma jijiji na ụzọ iji belata mmetụta ha.
Gọọmentị Taiwanese na-etinye ego na njem nleta na ebumnuche nke ịdọta ihe karịrị nde mmadụ 8 njem nleta kwa afọ. Ọtụtụ ndị ọbịa si Japan, yana mba China.
Isi obodo, Taipei, bụ obodo na-ekwo ekwo ma dị ọkụ, na-enye ọtụtụ ebe nkiri. Lọ ihe nkiri National Palace nwere mkpokọta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 700,000 nke ihe ochie na ihe osise ndị China oge ochie. Ihe ịrịba ama ọzọ bụ Chilọ Nzukọ Ncheta nke Chiang Kai-shek, nke e mere na ebe nchekwa nke Generalissimo Chiang Kai-shek, onye bụbu onye isi Taiwan, nke a na-akpọ aha ya na Republic of China. Ndị agha nọ ebe ahụ hụrụ ọmarịcha uwe ha na-acha ọcha, akwa bayon na-egbu maramara, na usoro nhazi. Bangka Longshan Temple bụ ụlọ okpukpe okpukpe ndị China wuru na 1738 site n'aka ndị ọbịa si Fujian n'oge ọchịchị Qing. Ọ bụ ebe ofufe na ebe nzukọ maka ndị China bi.
Ihe ngosipụta nke oge a bụ Taipei 101 Observatory, otu n'ime ụlọ kachasị elu na Taiwan. Site n'elu, mmadụ nwere ike ịnụ ụtọ ọmarịcha ngosi obodo ahụ. Ndị injinia Japan wuru ndị na-agba ọsọ ọsọ na-ebuga gị na ọkwa ikiri.
Ọtụtụ ndị njem nleta na-enwe ọ aụ ịga na otu n'ime ahịa abalị na-atọ ụtọ - ọgba aghara nke mkpọtụ na agba nwere ụzọ dị iche iche nke ụlọ ahịa, okpu, akpa, ngwaọrụ, ngwa eletriki, ihe egwuregwu na ihe ncheta jupụtara. Ihe na-esi ísì ụtọ nke na-esi n'okporo ámá nri nwere ike ịba ụba.
Taiwan nwere nnukwu ụlọ nri na ebe iri nri na-enye nri mba ofesi na nke mpaghara. Anyị nwere nri echefu echefu na Palais de Chine nkwari akụ na ụlọ oriri na ọ restaurantụ Japaneseụ ndị Japan dị na Okura hotel. Anyị gakwara n’otu nnukwu ụlọ ahịa dị na etiti Taipei, ebe ndị isi nri na-enye ofe, anụ ehi na-agba agba, ọbọgwụ na ọkụkọ, nri mmiri, salads, noodles, na osikapa.
Ndị otu anyị kwetara na nri ikpeazụ anyị na Din Tai Fung Dumpling House bụ ahụmịhe kachasị mma nke njem ahụ. Ihe oriri pụrụ iche a na-enye gụnyere chili na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ jupụtara na anụ esere eghe, "Xiao Cai" - Oriental salad na mmanya mmanya pụrụ iche, na oporo na anụ ezi anụ ọhịa ndị a tụbara na ọkụkọ ọkụkọ.
Otu ìgwè nke ndị isi nri, na-arụ ọrụ na mgbanwe elekere 3, na-ewepụta dumplings na-atọ ụtọ nke ukwuu na-enye ọtụtụ ihe na-atọ ụtọ na nke a na-eche n'echiche. Ndị na-eje ozi na-amụmụ ọnụ ọchị mere ka anyị nwee usoro ọmụmụ na-adịghị agwụ agwụ, mana anyị ka chọta ohere ịnwale ihe eji megharịa ọnụ: dumplings na ihendori chocolate dị ụtọ.
Anyị jisiri ike laghachi na họtel anyị, dị ka anyị na-eme mgbe anyị risịrị nri ọ bụla, na-a vowụ iyi na anyị agaghị enwe ike inweta nri ọzọ - ruo mgbe anyị ga-eri nri ehihie ma ọ bụ nri abalị ọzọ mgbe ọnwụnwa ọzọ dakwasịrị anyị! Otu n’ime ndị otu anyị nwere mmụọ njiri mara ike jisiri ike chọba ebe mmadụ nwere ike ire ofe agwọ.
Hotels maka mmefu ego ọ bụla
Hotlọ oriri na ọ Hotụ inụ na Taiwan dị iche na ụlọ ọrụ okomoko nke 4 na 5 ebe mmadụ nwere ike ịgbazite onye ọ butụ butụ ọfụma ka ọ nwee nhọrọ dị mma maka ndị nọ na mmefu ego siri ike. Isi ụlọ anyị na Taipei bụ ezigbo ụlọ nkwari akụ Palais de Chine, nke ezubere iji jikọta ịdị mma na ịdị ebube nke otu obí eze nke Europe yana obi iru ala na ịdị jụụ nke Ọwụwa Anyanwụ. Ime ụlọ ndị ahụ dị mma, saa mbara ma dị ọcha.
Ndị ọrụ ahụ na-enyere aka ma nwee nkwanye ùgwù. Nke a bụ ahụmịhe m mbụ nke agbụ Palais de Chine, enwere m afọ ojuju na m ga-anọ ọzọ ma ọ bụrụ na ohere dapụta.
Grand Hotel bụ nnukwu ụlọ ọzọ nwere mkpa akụkọ ihe mere eme. E hiwere ụlọ oriri na ọ hotelụ 1952ụ ahụ na XNUMX na iwu nke nwunye Chiang Kai-Shek iji jee ozi dị ka ezigbo ntọala maka ndị isi na-eleta na ndị isi mba ọzọ. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ dị n'elu ụlọ na-enye echiche dị egwu banyere Taipei.
Taiwan na agwaetiti ndị dị n'èzí gbara ihe dị ka kilomita 36,000 nke ọhịa, ugwu, na mpaghara ndị gbara osimiri gburugburu. O nwere akụrụngwa emepụtara nke ọma iji nwee ọ activitiesụ site na njem, ịgba ịnyịnya ígwè, ụgbọ mmiri na egwuregwu mmiri ndị ọzọ, nnụnnụ nnụnụ, na ịgagharị saịtị ndị mere eme.
Mgbe ihe omume anyị gbasiri ike, ọ bụ ihe obi ụtọ ịpụ na Taipei gaa Sun Lake Lake mara mma. Ọ bụ ihe na-enye obi ụtọ ịmụrụ anya na anya nke ọdọ mmiri dị jụụ nke ugwu ndị jupụtara na osisi na ifuru osisi gụnyere achara, cedar, nkwụ, frangipani, na hibiscus. Anyị ji ụgbọ mmiri banye n'ụlọ nsọ, nke nwere ozu nke mọnk Buddha, Xuanguang, na akpụrụ akpụ nke ọla edo edo edo Sakyamuni. Anyị enweghị ike ịpụ n'ejighị nri ụtọ Taiwanese ọzọ, n'agbanyeghị na ihe uto enwetara - nsen esi na tii. A na-ere ha n'obere ụlọ ebe otu nwanyị gbara afọ iri itoolu na-agba ọsọ, onye nwere ọtụtụ afọ kemgbe ọtụtụ afọ, nke na-azụ ahịa naanị ihe doro anya.
Mpaghara gburugburu ọdọ bụ ebe ndị Thao nọ, otu n'ime ihe karịrị agbụrụ iri na isii na Taiwan. Dabere na akụkọ ifo, ndị na-achụ nta Thao hụrụ otu mgbada na-acha ọcha na ugwu wee chụga ya n'ikpere mmiri Sun Moon Lake. Ọ masịrị ha nke ukwuu nke na ha kpebiri ibi ebe ahụ. Ọ bụ ihe nwute karịa ịhụ ka ha belata n'ịme egwu na egwu ọdịnala maka ibute ụgbọ mmiri nke ndị njem nleta, mana mmadụ nwere ike ịmatakwu banyere akụkọ ihe mere eme ha na ebe ndị ọbịa nọ na mpaghara. Maka ire ere bụ ọrụ aka, seramiiki, na ihe ndị ọzọ ndị obodo ahụ mere. A maara mpaghara a maka tii si na Assam na Darjeeling weta. Ihe ọzọ dịnụ bụ mmanya emere site na mpaghara mpaghara gụnyere osikapa, millet, piom, na ọbụna achara.
Ọdịnihu ọdịnihu adịghị nke Taiwan
Taiwan bụ anụ ahụ ma nwee mmetụta dị egwu ma e jiri ya tụnyere nnukwu agbata obi ya, mana ndị ya na-echebe nchebe nke ọchịchị onye kwuo uche ya na ikike obodo. Site na ntuli aka onye isi ala na Jenụwarị, ndị Taiwanese na-egwu egwu na njedebe nke mkpọsa ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'ikpeazụ, mmadụ nwere ike ịnọ na-eche ogologo oge Beijing ga-enwe ọ happyụ ịhapụ ikwe ka Taipei guzobe onwe ya dị ka ntọala nke ọchịchị onye kwuo uche ya na ikike obodo dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na-enwe nnwere onwe ndị China na oke ala nwere ike na-eche naanị.
Amalọ oriri na ọ Japaneseụ Japaneseụ ndị Japan Yamazato, Okura Prestige Hotel, Taipei - Photo © Rita Payne
Ahịa abalị Shilin, Taipei - Photo © Rita Payne
Ahịa abalị nke Shilin - Foto © Rita Payne
Ndị isi nri na Din Tai Fung Dumpling House, Taipei Alaka 101 - Foto © Rita Payne
Nginggbanwe ndị nche, National Chiang Kai-shek Memorial Hall, Taipei - Photo © Rita Payne
Chilọ Nzukọ Ncheta Chiang Kai-shek, Taipei - Foto © Rita Payne
Ọdọ Mmiri Anyanwụ - Foto © Rita Payne